TRUESTORY: ဒေါ်စုကြည် သမ္မတ ဖြစ်မှပဲတိုင်းပြည်တိုးတက်တော့မှာလား....!!!!!!
ယုံကြည်နေသူတွေ အများအပြားရှိနေတဲ့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အခုထိမသေ ချာသေးဘူး၊ စိုးရိမ်ရမယ့် အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။
NLD ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ ၊လက်ရှိအနေအထား ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့တပ်မတော်နဲ့ အချို့သဘောထားတင်းမာသူတွေရဲ့ မကျေလည်မှု့တွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကို အချိန်မရွေး ပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
NLD ထောက်ခံသူတွေ ဝန်းရံသူတွေ တခုသတိထားသင့်တာက၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် မကောင်း တာ၊ ကြံခိုင်ရေး အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြောစရာအမှားတွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့တာ လူတိုင်းသိတဲ့ ကိစ္စတွေပါ၊ မဆန်းတော့ပါဘူး။
သို့သော်.. အရင် နအဖ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဦးသိန်းစိန်ကို ကြားနေသာမန် အရပ်သားတွေထဲကထောက်ခံသူ အများအပြားရှိလာတာဟာ၊NLD အတွက် စိုးရိမ်စရာပဲ။ မဟုတ်ပါဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမျက်စိမှိတ် ဘူးခံငြင်းမယ်ဆိုလည်း ပြသနာမရှိပါ၊အချိန်က သက်သေပြပါလိမ့်မယ်၊လက်တလော ထင်ရှားစေခဲ့တာကတော့၊အတိုင်းအတာတခုအထိ. သန့်ရှင်းပြီး တရားမျှတပါတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကရော အတိုက်အခံတွေကပါ လက်ခံထားတဲ့၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ရခဲ့တဲ့ မဲအရေအတွက်ဟာ NLD လောက်မရပေမယ့် ပါတီမှာ ထောက်ခံသူ အများအပြားရှိတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပါ၊ လက်မခံရင် မဲစာရင်းတွေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာ လုပ်ရပ်တွေလုပ်လာနေတဲ့ NLD ပါတီဟာ ၁၉၉၀ တုန်းကလိုမျိူးး ထောက်ခံမှု့ မျိုး ကို မျော်လင့်ထားရင်မှားပါလိမ့်မယ်၊ အမေစု ဘာလုပ်လုပ်မှန်တယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ဝေဖန်ထောက်ပြ လာကြတဲ့ ကြားနေသူ သာမန်အရပ်သားတွေကို တိုက်ခိုက်နေကြ ရင်တော့ဖြင့် NLD ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုံးပါးပါးလိမ့်မယ်။
အခုလို ထောက်ခံမှု့ ကျဆင်းနေတဲ့ရလာဒ်ဟာ၊မဝေးတော့တဲ့ ကာလမှာ ၅၉ (စ) ကို လွတ်တော်လမ်းကြောင်းအရ ဖြစ်ဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူ့အားနဲ့ ဖိအားပေးပြင်ဘို့ကြိုးစားလာရင်တော့ ထိုင်းမှာလို ရှပ်နီ ရှပ်ဝါ ပြသနာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ အများအပြားရှိစေတာပါပဲ။ NLD အနေနဲ့ ဟိုတုန်းကလို အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုတည်းကို ရင်ဆိုင်ရမှာ မဟုတ်တော့ပဲ၊ ပြည်သူတွေထဲကပါ ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးတော့မှာဖြစ်ပြီး တပ်မတော်ကတော့ အခြေအနေဆိုးလာရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း ပုံအတိုင်း တိုင်းပြည်အာဏာကို တရားဝင် ရယူပါလိမ့်မယ်...
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သမ္မတ ဖြစ်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ရေးလဲမှာလား
Posted by TRUE STORY at 4:43 PM